Ikhaya eliLuhlaza-Uhlaziyo oluhlaza | Ukuhlaziywa okuluhlaza (iphepha 2)
Unkcenkceshelo lwedriphu yasekhaya
Kweli nqaku sikuxelela yonke into ekufuneka uyazi ukuba uyenze ngenkqubo yonkcenkceshelo lwedriphu yasekhaya.
Isibane selanga esizenzele ekhaya
Kule nqaku sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana ukuze ufunde indlela yokwenza isibane selanga. Funda nzulu apha.
Sikufundisa yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-dimmer, iimpawu zayo kunye nokusebenza. Funda ngakumbi ngayo apha.
Igadi yeziqhamo ethe nkqo
Kule nqaku sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga negadi ethe nkqo kunye neempawu zayo.
Fumana apha zonke iinkcukacha malunga nendlu yePassive, uhlobo lendlu enobugcisa obuyilo lwe-bioclimatic.
Kule nqaku sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga nezitovu zegesi kunye nendlela ezisebenza ngayo. Funda ngakumbi ngazo apha.
Sikuxelela ngokweenkcukacha yonke into ekufuneka uyazi malunga nezitovu zokhuni. Funda ngakumbi malunga neendidi kunye neempawu zazo.
Sikuxelela yonke into ofuna ukuyazi malunga nendlela ezithambisa ngayo amanzi kunye nezibonelelo zazo. Funda ngakumbi ngayo apha.
Kweli nqaku siza kukuxelela iimpawu, ukusetyenziswa kunye nokhathalelo lwe Kalanchoe. Funda okungakumbi ngesi sityalo silungileyo sokuhombisa.
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nezitovu zamanzi
Kule posi sikuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga nokuba zeziphi izitovu zehydro, iimpawu zazo kunye nendlela abasebenza ngayo. Ngena ukuze wazi ngakumbi.
Kule nqaku sikubonisa ukuba zeziphi izinto ezifunwayo ziziko lobumba kunye nendlela yokwakha inyathelo ngenyathelo. Ngena apha ukwazi okungakumbi.
Izindlu zokugcina indlu
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi izindlu zokugcina izindlu eziluncedo kunye nokuba zeziphi izibonelelo abanazo. Funda indlela yokwakha indlu eluhlaza endlwini yakho.
Indawo yomlilo yeBioethanol
Sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga neendawo ze-bioethanol fireplaces. Zazi izibonelelo eziphambili kunye nokungalunganga kwezi ndawo zomlilo.
Kule nqaku sikunika iingcebiso zokuba usebenzise amandla okonga ekhayeni lakho. Funda ngendlela yokwenza ikhaya lakho lihlale lizinzile.
Uyenza njani into yokuhlaziya umoya
Sikufundisa yonke into oyifunayo ukuze wenze izinto ezihlaziya umoya wasekhaya. Funda ukuhombisa indlu yakho ngaphandle kokusebenzisa ityhefu.
Uyilo lweBioclimatic lusebenzisa izixhobo ezifanelekileyo ukwakha ikhaya elizinzileyo. Ngena apha ukuze uyazi kakuhle.
I-Bioconstruction isekwe kulwakhiwo lwezindlu zendalo, zisenza ngathi ziphilile kwaye zisebenza ngokugqibeleleyo zisebenzisa izixhobo zendalo.
ICastilla-La Mancha ixhasa amandla amandla ahlaziyekayo
ICastilla-La Mancha izakukhuthaza inkxaso-mali ehlaziyekayo kunye nokusebenza kwamandla. Amandla ahlaziyekayo okhethiweyo aya kuba yi-geothermal, umoya kunye ne-photovoltaic energy ukuze sikwazi ukubakho emakhaya, kuluntu nakwiinkampani.
Indlu encinci yendalo ekhoyo yeembacu eParis
Indlu yokuqala yendalo encinci iya kufumaneka eFrance ukwamkela iimbacu. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngolu hlobo lwezindlu zendalo?
Izakhiwo zeZero, ezona zisebenza ngamandla
Izakhiwo ze-Zero zezo zakhiwe ukuze ukusetyenziswa kwamandla kube kuncinci kwaye kube nokuzimela. Ngaba uyafuna ukwazi ngayo?
Zinjani izindlu zomthi, iintlobo ezikhoyo kunye nezibonelelo kunye nezinto ezingalunganga kunye nemiba yezomthetho ekufuneka ithathelwe ingqalelo.
Isixeko sokuqala selanga siseMelika kwaye siza kubizwa ngokuba yiBabcock Ranch, isixeko esiza kuba nesityalo selanga, iigadi zoluntu, njl.
I-Asiya ikulungele ukugqitha iYurophu ngombane webiomass
Ngo-2015 umahluko phakathi kwe-ASIA ne-EUROPE wawungaphezulu kwe-6.000 MW kwaye kunyaka olandelayo wawufikelela kwi-1.500. Indaleko kunye nekamva le-biomass
UTesla ufuna ukwakha esona sixeko sizinzileyo kwihlabathi
I-Tesla iza kwakha isixeko esibonelelwa nge-100% ngamandla ahlaziyekayo, ngezothutho lombane kuphela kunye nezitalato zabahambi ngenyawo ngokupheleleyo
Kuza kwenzeka ntoni eYurophu ngamandla ahlaziyekayo kunye nokuzisebenzisa?
I-EON ibongoza abasebenzisi bayo ukuba bazityele kwaye baya kumilisela inkqubo ebizwa ngokuba yiSolarCoud evumela ukuba ivelise kwaye igcine umbane. Ikamva lokuzisebenzisa
Izindlu zelanga, izindlu zekamva
Izindlu zelanga zinokuba ziindidi ezahlukeneyo ezinezibonelelo ezinjengeepaneli zelanga, ukusetyenziswa kwamanzi kancinci. Izindlu zexesha elizayo zilapha.
Enye yezona ndlu zisebenza kakuhle kwihlabathi zakhiwe eIbiza
Enye yezona zindlu zisebenza kakuhle kwihlabathi zinikezelwe eIbiza kwinkomfa yokusebenza kwamandla eyenziwe yiTerravita.
Isakhiwo sokuhlala esakhiwe eMadrid sinowona mandla mikhulu ohlaziyekayo wamandla eSpeyin ukwandisa ukusebenza ngokukuko.
ESchlierberg, ingingqi yaseJamani eFreiburg, bavelisa amandla aphindwe kane kunalawo bawasebenzisayo xa bechitha iiyure ezili-1.800 XNUMX ngelanga ngonyaka.
Ukucoca izixhobo zokucoca umoya
Ekuqaleni babebiza, benengxolo kwaye bengahlali kakhulu. Namhlanje, ionizing izinto zokucoca umoya zenzelwe ukucoca umoya esiwuphefumlayo.
I-Popup House, indlu engacacanga eyakhiwe ngeentsuku ezine
Ukwakha indlu ene-screwdriver kunye nezinto ezenziwe ngokutsha ezinokubonakala ngathi ziyintsomi. Kwaye okwangoku kukubheja ukuba i-Multipod Studio kunye neNdlu yokuzivelela.
Ukuhlamba iimpahla ngomnye wemisebenzi eyenziwa rhoqo ngaphandle kokulinganisa iziphumo zayo, ukuchitha amanzi amaninzi (ngesiqhelo aselwayo) kunye nesepha. Makhe sibone iingcebiso zokuhlamba iimpahla ngaphandle kokungcolisa kakhulu.
Umatshini wokuhlamba isepha, ifuthe kwindalo esingqongileyo
Kule mihla, ukusebenzisa umatshini wokuhlamba kunyanzelekile ukuba usebenzise isepha efanelekileyo, kwaye ikwasebenza ngokusemandleni.
Iifriji eziluhlaza kwimarike
Kwimarike kukho iimodeli ezininzi zeefriji ezinobubele
Ukutshaya kuyonakalisa imeko-bume yomhlaba
Amakhaya aluhlaza atyalo-mali olukhulu lokuthengiswa kwezindlu
Namhlanje unokukhetha phakathi kwabapheki begesi kunye nabapheki bombane kwikhaya lethu
Iindlela zobuchwephesha zokurisayikilisha isixhobo
Zimbini iindlela zokuphinda usebenzise izixhobo zetekhnoloji
Incwadi yezityalo, ilaptop entsha kunye nendalo
Uhlobo lweTechbook lwetekhnoloji luzinzile ngokwenene
Uphando malunga nokusetyenziswa kunye neemoto zombane
Uphando olunomdla malunga nokusetyenziswa kweemoto zombane kumazwe ali-16
Imouse yendalo kwikhompyuter yakho
Inkampani yeGenius yazisa uthotho lweempuku zendalo
Izitena ze-hemp eziphilayo
Izitena ze-hemp yinto yokwakha yendalo yokwakha
Izindlu zeBioclimatic (4). Iipatios ezimanzi.
Siyaqhubeka nokuzibophelela ekuthumeleni ubuchule bokwakha bicoclimatic ukudala izindlu ezisebenzisa imeko yendalo esingqongileyo ...
Ukufakwa kwe-Thermal sisixhobo esihle sokugcina amandla kuba sisebenza njengesithintelo somoya esivela ngaphandle ukungena ngaphakathi endlwini.
Kule tekisi ndicacisa amanye amanyathelo alula okuphefumlisa indlu ngendlela yendalo kunye nokonga imali kunye namandla.
Izenzo ezi-5 ezilula zokunciphisa umkhondo wekhabhoni
Ngezenzo ezilula sinokunciphisa i-carbon footprint yethu
Ukonga umbane kubalulekile kumazwe ahambele phambili
I-Bioplastics yokwenza izixhobo zendalo
I-Bioplastics iya kuba sisisombululo esihle sokuphumeza izixhobo zendalo
Ukufakwa kwe-Thermal ngezinto zendalo yenye yeendlela ezilungileyo zokonga amandla ekhaya
Amandla elanga kunye nokufakwa kwayo okwahlukileyo eluphahleni okanye emhlabeni
Iifriji zetekhnoloji yeGreenfreeze zezona zinto zihlala kwindalo okanye ezinobungqongileyo
Wonga malini ngamandla elanga?
Amandla elanga asindisa izixhobo kunye nemali
Iikhompyuter ezinobuhlobo kwindalo
Namhlanje ehlabathini kukho izigidi zeekhompyuter okanye iikhompyuter kwaye imveliso kunye nokusetyenziswa kwazo kuyaqhubeka nokukhula rhoqo, ke ...
Kubomi bethu bemihla ngemihla sisebenzisa amandla kwaye amaxesha amaninzi asazi ukuba sisebenzisa ngokungalunganga ...